English Archives - HealthyKhabar
Kathmandu, July 8: Increasing unhealthy lifestyle, including smoking, pesticides and insecticides lashed foods, fruit and vegetables are some of the leading causes of cancer, according to doctors. “Cancer has become one of the most daunting life-risking factors in Nepal,” they added. According to Dr Abish Adhikari,aClinical Oncologist, common cancers seen in Nepal are cancers of lung, head and neck and intestines in males; while breast and cervical cancer are common in females; and blood cancer in children. Dr. Adhikari cautioned that smoking, unhealthy eating habits, drinking alcohol, obesity and infections are the major reasons behind increasing incidents of cancer. Besides, use of insecticides and pesticides in food production has also been contributing to the rise in cancer cases, he said. “Genetic factors also lead to cancer,” he added. As per the World Health Organisation (WHO), cancer is one of the leading causes of morbidity and mortality worldwide. According to…
ब्रिटेनमा सन् २००७ मा धूमपान प्रतिबन्धित गरियो, त्यसको एक दशकपछि सामान्य खोल राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरियो। त्यो सबै मानिसहरूलाई चुरोट खानबाट निरुत्साहित गर्न गरिएको हो। र, चिनी पनि चुरोटकै बाटो लागिरहेको देखिन्छ।? ब्रिटेनमा गुलियो पेय पदार्थमाथि कर लगाइएको छ। र अहिले अग्रणी थिङ्क ट्याङ्कले गुलिया पदार्थको आवश्यकता भन्दा बढी खपतका कारण चिनी प्रयोग हुने सबै खाद्यपदार्थहरूलाई आकर्षक नबनाइयोस भनेर साधारण खोल राखेर बेच्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। उक्त माग इन्स्टिट्यूट फर पब्लिक पोलिसी रिसर्च (आइपिपिआ) ले आफ्नो नयाँ प्रतिवेदनमा गरेको छ। सामान छान्न उपयोगी आइपिपिआरका निर्देशक टम किबासी यसले साँच्चै फरक पार्ने विश्वास गर्छन्। ‘साधारण खोलले हामीलाई राम्रो सामान छान्न मद्दत गर्छ र व्यस्त अभिभावकलाई सामान किनिदिन कर गर्ने बच्चाले गर्ने पिरलोमा कमी ल्याउँछ,’ उनले भने। यसको साथै तयारी खानेकुराहरूको विज्ञापनमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने लगायतका अरू उपायहरू अपनाइएको उनी हेर्न चाहन्छन्। त्यसबारे पहिल्यै मन्त्रीहरूले सोचिसकेका छन्। तर के साधारण खोल हाल्ने कदम सफला होला ? कदमविरुद्ध उद्योग उद्योगहरूले यसबारे आपत्ति…
पछिल्लो समय विद्यालयमा यौन शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको छ । विद्यार्थीलाई सानै उमेरदेखि यौनजन्य कुराहरुमा सचेत बनाउने प्रयास भइरहँदा एक स्कुलले भने आफ्नी छात्राले उत्तर पुस्तिकामा लेखेको उत्तरकै कारण ती छात्रालाई स्कुलबाटै निकालिदिएको छ । पछिल्लो समय एक छात्राले यौन शिक्षाको परीक्षामा दिएको उत्तर पुस्तिका सामाजिक संजालमा निकै भाइरल भइरहेको छ । मात्रै १४ वर्षकी छात्राले परीक्षामा दिएको एउटा उत्तरले सामाजिक संजालमा तुफान ल्याइदिएको छ । उनलाई यौन सम्पर्कका बेला कण्डम प्रयोग नगर्ने विषयमा प्रश्न सोधिएको थियो । उनको जवाफ देख्दा शिक्षकको होसहवास उड्यो । यही जवाफका कारण ती छात्रालाई स्कुलबाटै निकालियो । मारिया नामकी यी छात्रालाई आफ्नो पार्टनरले कण्डम प्रयोग नगर्नको लागि बनाउने बहानाहरु दिइ पार्टनरले त्यस्तो बहाना बनाएमा कस्तो जवाफ दिन्छौ भनेर सोधिएको थियो । ‘यदि पार्टनरले मसँग कण्डम छैन भन्यो भने ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा ती छात्राले सिधै लेखिन् ‘त्यसो भए मसँग योनी छैन ।’ ‘कण्डम किन्न लाज लाग्छ’ भन्ने बहानाको जवाफमा उनले लेखेकी छिन् ‘त्यो…
दक्षिण पूर्वी एशियाली मुलुक ब्रुनाईले समलिङ्गीलाई ढुङ्गाले हिर्काएर मारिने सजाय भएको नयाँ इस्लामिक कानुन बुधवारदेखि लागु गरेको छ। नयाँ कानुनमा चोरीको सजाय हातखुट्टा काटिने जस्ता व्यवस्थाहरू रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा धेरैले यो कानुनको विरोध गरेका छन्। ब्रुनाईको समलिङ्गी समुदायले आफूहरूले मध्ययुगको जस्तो सजायहरूको पाउनसक्ने डर व्यक्त गरेका छन बहिस्कार गर्न आह्वान "तपाईँ उठ्दा तपाईँको छिमेकी वा परिवार वा सडककिनारमा व्यापार गर्ने वृद्धाले समेत तपाईँलाई मानव नै होइन या ढुङ्गाले हानेर मार्नु ठिक हो भन्ठान्ने भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ," ब्रुनाईका एक जना समलिङ्गीले बीबीसीलाई आफ्नो परिचय नखोल्ने आग्रहका साथ बताए। नयाँ कानुन अनुसार कुनैपनि व्यक्तिलाई समलिङ्गी व्यवहार गरेको चारजनाले देखेका वा आफैंले स्वीकार गरे मात्रै सजाय दिन सकिन्छ। ब्रुनाईमा समलिङ्गी सम्बन्ध पहिलेपनि गैरकानुनी थियो र १० वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्थ्यो। तेल र ग्याँस निर्यातका कारण धनी बनेको ब्रुनाईलाई ७२ वर्षीय सुल्तान हसनल बोल्कियले शासन गर्छन्। संसारका ठूला होटलहरू सञ्चालन गर्ने ब्रुनाई इन्भेष्टमेन्ट एजेन्सीको नेतृत्व सुल्तानले गर्छन्।ए नयाँ कानुन लागु गर्न…
ब्रुनाई समलिङ्गीलाई ढुङ्गाले हिर्काएर मार्ने कानुन लागु गरेर समलैङ्गिकतामा मृत्युदण्ड सजाय दिने आठौँ देश भएको छ। त्यस्तो कानुन भएको अन्य देश इरान, साउदी अरब, यमन, सुडान, मौरिटानिया, नाइजेरिया र सोमालिया हुन्। नाइजेरिया र सोमालियाका केही प्रान्तमा समलिङ्गीलाई मृत्युदण्डको सजाय भएको अन्तर्राष्ट्रिय लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रान्स र इन्टर्सेक्स सङ्घ आईएलजीएले जनाएको छ। कुनकुन देशले समलिङ्गीलाई मृत्युदण्ड दियो भन्ने पत्ता लगाउन भने सहज छैन। एमनेस्टी इन्टर्न्याश्नलले विगत केही वर्षमा समलिङ्गीलाई मृत्युदण्ड नदिइएको बताएको छ। तर इरान र साउदी अरबमा समलिङ्गीलाई मृत्युदण्ड दिइएको इतिहास छ। नाइजेरियाको मुस्लिमबाहुल्य उत्तरी प्रान्तहरूमा त्यस्तो व्यवस्था भएपनि त्यो कहिल्यै लागु गरिएको छैन। समलिङ्गी सम्बन्ध गैरकानुनी कहाँ छ? ब्रुनाईमा पहिले पनि समलैङ्गिकता गैरकानुनी थियो र यसको सजाय १० वर्ष कैद थियो। समलिङ्गीविरुद्ध कानुन भएका देश नयाँ कानुनले महिलाबीचको समलिङ्गी सम्बन्धलाई पनि गैरकानुनी मानेको छ। यसको सजाय ४० कोर्रा वा १० वर्ष जेल वा दुवै रहेको छ। आईएलजीएको अनुसार संसारका ७० देशमा समलिङ्गी सम्बन्ध गैरकानुनी रहेको छ। रुससहित अन्य देशमा…
न्यूजिल्यान्डको क्राइस्टचर्चस्थित दुईवटा मस्जिद गत महिना गरिएको आक्रमणका प्रमुख आरोपितको मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण गराउन आदेश दिइएको छ। मुद्दाको सुनुवाइका लागि मानसिक रूपमा उनी स्वस्थ्य रहे वा नरहेको अथवा विक्षिप्त रहेको कुराको विज्ञहरूले निर्क्योल गर्नुपर्ने उच्च अदालतका न्यायाधीश क्यामरुन म्यान्डरले बताए। मुख्य आरोपितमाथि ५० वटा हत्याको र ३९ वटा हत्याको प्रयास गरेको आरोप छ। आरोपित अस्ट्रेलियाका २८ वर्षीय नागरिक ब्रेन्टन टारेन्ट भिडिओ लिङ्कमार्फत् देखिँदा पीडितका आफन्तहरू उपस्थित भएको अदालतको कक्ष खचाखच भरिएको थियो। आफूमाथि लगाइएका अभियोगविरुद्ध उनले निवेदन दिन पाएनन्। न्यूजिल्यान्डमा भएको त्यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आक्रमण थियो। न्यूजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डर्नले त्यसलाई न्यूजिल्यान्डको 'कालोदिन मध्येको एउटा' भएको बताउने गरेकी छिन । उनले खबै खाले अर्धस्वचालित अस्त्र र राइफलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। अदालतमा के भयो? शुक्रवार बिहान न्यायाधीश म्यान्डरले आरोपितको स्वास्थ्य अवस्थाबारे निर्क्योल गर्न दुईवटा काम गरिने बताए। आरोपितले ध्यानपूर्वक अदालतको सानो सुनुवाइ सुनेका थिए। तर उनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्। उनले न्यायाधीश र वकिललाई हेर्न सकेका थिए र सुनुवाइलाई…
इरानमा बाढी: ७० जनाको निधन , हजारौ परिवार विस्थापित
इरान , २३ चैत । बाढीग्रस्त इरानमा शनिवार पनि ठूलो वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएपछि त्यहाँका नगर र गाउँहरूबाट मानिसहरूलाई अन्यत्र सारिँदैछ। मुख्य नदीका बाँधमा त्यसको क्षमता जति पानी भरिने भएपछि अधिकारीहरूले पानीको निकास दिने योजना बनाइराख्दा देशको दक्षिणपश्चिम प्रान्तहरूमा असर गर्ने देखिएको छ। उक्त क्षेत्रबाट महिला र बालबालिकालाई सुरक्षित स्थानतिर सारिँदै छ भने पुरुषहरूलाई उद्धार तथा राहतको काममा सहयोग गर्न तिनै क्षेत्रमा बस्न भनिएको छ। केही सातादेखि भएको वर्षामा देशका केही भागहरू जलमग्न भएका छन्। हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या हालसम्म ७० पुगेको छ। जोखिम पचास हजार जनसङ्ख्या भएको सुसानगर्डजस्ता नगरहरू बाढीको जोखिममा छन्। त्यहाँबाहेक खुजेस्तान प्रान्तका अन्य पाँच समुदायबाट पनि मानिसहरूलाई अन्यत्र सारिँदैछ। इरानभरि बाढी आएको छ गत साता यो प्रान्तबाट करिब ७० गाउँहरू खाली गरिसकिएको छ। यो क्षेत्र तेलका लागि धनी छ र यहाँ रहेका ऊर्जा कम्पनीहरूले पम्प प्रयोग गरेर पानी हटाउँदै राहतमा सघाइरहेका छन्। मार्च १९ मा सुरु भएको वर्षाका कारण इरानका झन्डै १९ सय नगर, सहर र…
पुरुषले सेवन गर्ने गर्भनिरोधक चक्की मानवमा गरिने सुरक्षासम्बन्धी प्रारम्भिक परीक्षणमा सफल भएको दाबी एउटा प्रसिद्ध चिकित्सकीय सम्मेलनमा गरिएको छ। दैनिक एक चोटि सेवन गर्नुपर्ने सो चक्कीमा शुक्रकीटको उत्पादन रोक्ने हर्मोन हुन्छ। पुरुषहरूका लागि परिवार नियोजनका लागि कन्डम र भ्यासेक्टमी मात्रै रहेको अवस्थामा यो चक्की एउटा स्वागतयोग्य साधन हुनेछ। तर एन्डोक्राइन सोसाइटीको वार्षिक सम्मेलनमा सो चक्की बजारमा उपलब्ध हुन अझै एक दशक लाग्न सक्ने बताइएको छ। यौन इच्छा यूकेमा ५० वर्षभन्दा अगाडि महिलाहरूले सेवन गर्ने गर्भनिरोधक चक्की उपलब्ध भएको थियो। तर किन पुरुषले सेवन गर्ने चक्की बन्न गाह्रो भएको होला? कसैले सामाजिक र व्यापारिक रुचि कम भएका कारण नबनाइएको दाबी गरे पनि सर्वेक्षणहरूमा धेरै पुरुषले उपलब्ध भए त्यस्तो चक्की प्रयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। महिलाहरूले पुरुषले चक्की खाएको कुरा पत्याउँछन् कि पत्याउँदैन्न भन्ने अर्कै विषय हो। सन् २०११ मा यूकेमा गरिएको एक अध्ययनमा झन्डै आधा महिलाले त्यस्तो चक्की उपलब्ध भएमा आफ्ना पुरुष साथीले त्यो खाए वा नखाएकोमा चिन्ता लाग्ने बताएका थिए।…
जुम्ल्याहा बच्चाका फरक-फरक बाबु ! कसरी भयो सम्भव ?
चीनमा एउटा अनौठो घटना भएको छ । एक महिलाले जन्माएको जुम्ल्याहा सन्तानका पिता फरक फरक ब्यक्ति भएको पुष्टि भएको छ । यो घटना चीनको सियामेन सिटीको हो । डीएनए परीक्षणबाट जुम्ल्याहा बच्चाका बुबा फरक फरक रहेको तथ्य खुलेको चिनियाँ सञ्चार माध्यमलाई उद्दृत गर्दै डेली मेल अनलानइनले जनाएको छ । सो कुरा पुष्टि भएपछि डाक्टर पनि अचम्ममा परेका थिए । जुम्ल्याहा बच्चा जन्माउने दम्पती बच्चाको जन्म दर्ता गराउनका लागि सियामेन पुलिसमा गएका थिए । त्यहाँ उनीहरुले बच्चाको डीएनए रिपोर्ट मागेपछि यो कुराको खुलासा भएको हो । ती महिलाले आफ्नो श्रीमानलाई धोका दिएर अन्य व्यक्तिसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको डीएनए परीक्षणपछि स्वीकार गरेकी थिइन् । यस्तो घटना निकै कम मात्रै हुने विशेषज्ञको भनाइ छ । कुनै पनि महिलाले निकै कम समयको बीचमा दुई पुरुषसँग यौन सम्बन्ध कायम गरे तथा त्यसक्रममा एउटा डिम्ब ती दुई छुट्टा–छुट्टै पुरुषको शुक्रकिटबाट सेचन भएमा यस्तो हुने विशेषज्ञहरुको निष्कर्ष छ । अहिलेसम्म विश्वमा फरक–फरक बुबा भएका जुम्ल्याहा जन्मेको १०…
पहिलो बच्चा जन्माएको एक महिनापछि अर्को दुईजना बच्चा जन्माउने महिला
एकजना बांग्लादेशी महिलाले समयअगावै एउटा छोरा जन्माएको झण्डै एक महिनापछि अर्को जुम्ल्याहा बच्चा जन्माएकी उनका चिकित्सकले बीबीसीलाई बताएका छन्। बीस वर्षीया आरिफा सुल्तानाले गत फेब्रुअरीको अन्त्यतिर एक छोरालाई जन्म दिएकी थिइन्। त्यसको २६ दिनपछि उनलाई पेट दुखेपछि हतारहतार अर्को अस्पतालमा लगिएको थियो। त्यहाँ चिकित्सकहरूले उनको दुईवटा गर्भाशय रहेको र अर्को गर्भाशयमा जुम्ल्याहा बच्चाहरू रहेको देखेपछि आकस्मिक सिजेरिएन शल्यक्रिया गरेका थिए। त्यसरी जन्मेका जुम्ल्याहा बच्चाहरू स्वस्थ रहेका र तिनीहरूलाई अस्पतालबाट घर पठाइसकिएको छ । समाचारबाट आश्चर्यचकित बांग्लादेशको ग्रामिण क्षेत्रकी आरिफा सुल्तानाले उनको पहिलो बच्चा खुल्ना जिल्लास्थित खुल्ना मेडिकल कलेज अस्पतालमा जन्माएकी थिइन्। त्यसको २६ दिनपछि नै उनलाई पेट दुखेपछि जेसोर जिल्लास्थित अद्दीन अस्पतालमा लगिएको थियो। "जब बिरामीलाई ल्याइयो हामीले उनको अल्ट्रासाउण्ड परीक्षण गर्‍यौँ र उनको पेटमा जुम्ल्याहा बच्चा भएको थाहा पायौँ," उनको उपचार गरेकी स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. शीला पोद्दारले बीबीसीलाई बताइन्। उनले भनिन्, "यो घटनाबाट हामी एकदमै स्तब्ध र आश्चर्यचकित भएका छौँ। मैले यसअघि यस्तो घटना कहिल्यै देखेको थिइनँ।" आरिफा सुल्ताना…
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चैत १७ गतेदेखि जनस्वास्थ्य र मिडवाइफ्री सम्बन्धि पढाई हुने
काठमाडौँ, १३ चैत । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान जुम्लाले स्नातक तहका जनस्वास्थ्य र सुँढेनी (मिडवाइफ्री) अध्ययन शुरु गर्न लागेको छ । कर्णाली प्रदेशमा पहिलोपटक पब्लिक हेल्थमा २० र मिडवाइफ्री १० जनाले यही चैत १७ गतेदेखि सो तहको अध्ययन शुरु गर्न लागेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । ती तहमा अध्ययन गर्ने अधिकांश कर्णाली प्रदेशका र केही अन्य प्रदेशका रहेका छन् । यसअघि स्नातक तहको नर्सिङ र प्रमाणपत्र तहको स्वास्थ्य सहायक तहको अध्ययन अध्यापन शुरु गराइसकेको छ । स्नातक तहको एमबिबिएस र एमडिजीपीका तहका अध्ययन अध्यायन गराउन प्रतिष्ठानले आवश्यक तयारी पूरा गरेको प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा राजेन्द्र वाग्लेले जानकारी दिए । नेपाल मेडिकल काउन्सिल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुगमन टोलीले जुम्लास्थित प्रतिष्ठानको ती तहका अध्ययनका भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, जनशक्तिको स्थलगत अध्ययन पूरा गरिसकेको छ । तर काउन्सिलले हालसम्म ती तहको अध्ययन अनुमति नदिँदा कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि थप समस्या बन्दैछ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ती दुई तहका अध्ययन प्रतिष्ठानबाट…
चैत ८ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश नं ५ को रुपन्देहीस्थित तिलोत्तमा नगरपालिकामा बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाको आज उद्घाटन गर्नुभएको छ । सरकारको एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको अवधारणानुरुप सो कलेज बन्न लागेको हो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणमा सरकार गम्भीर ढङ्गले लागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनता सधैँ पीडामा बस्ने होइन, अब खुशी र सुखी बन्न पाउनुपर्छ । अब त्यो आत्मविश्वास लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरेको राम्रो कामको प्रचार गर्नुको साटो केही मिडियाले गलत प्रचार गरेको बताउनुभयो । “आँखा चिम्लेर सरकारको विरोध गरिएको छ, आँखा खोल्दा जताततै विकास र समृद्धि देखिन्छ, यसमा केही मिडिया र केही बुद्धिजीवी सहभागी छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सिके रातसँगको सहमतिले विखण्डनको अन्त्य भयो भनेरसमेत विरोध भयो, अरुको के कुरा ।” सरकारविरुद्ध भएका गलत प्रचार र भ्रममा नपर्न उहाँले सबैमा अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले तिलोत्तमामा निर्माण हुन लागेको मेडिकल कलेज सुविधासम्पन्न र स्तरीय…
मिर्गौला रोग लाग्न नदिन खानपानमा ध्यान दिउँः प्रधानमन्त्री
फागुन ३० गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिर्गौला सुरक्षाका लागि स्वस्थ खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । विश्व मिर्गौला दिवसको अवसरमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल मिर्गौला विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले सो कुरा बताएका हुन् । उक्त कार्यक्रम जनचेतनामुलक प्रभातफेरीको पनि आयोजना गरिएको थियो । ओलीले मिर्गौला रोग लाग्नै नदिन समय–समयमा स्वास्थ्य परिक्षण गर्नुपर्ने बताए । । प्रधानमन्त्री ओलीले स्वस्थ मिर्गौलाको लागि शारीरिक व्यायाममा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मिर्गौलाको डाइलासिस सेवा निशुल्क भएको थियो । हाल नेपालमा मिर्गौला फेल भएका व्यक्तिलाइ सरकारले निशुल्क डाइलासिस सेवाको व्यवस्था गरेको छ भने मिर्गौला प्रत्यारोपण पनि निशुल्क गरिएको छ । सरकारी अस्पतालमै मिर्गौला डाइलासिस सशुल्क गरेमा प्रतिमहिना २५ हजार लाग्दछ भने मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा पाँच लाख रुपैया लाग्ने गर्दछ । मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. दिव्यासिंह शाहले नेपालमा वार्षिक तीन हजार जनाको मिर्गौला फेल हुने गरेको जानकारी दिइन । उनले तीनहजारमध्ये ८० प्रतिशतको उपचार नपाइ ज्यान जाने गरेको…
स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले गरे मरणोपरान्त अंगदान
भक्तपुर, फागुन ३० गते । विश्व मिर्गौला दिवसको अवसर पारेर उपप्रधान , स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले मरणोपरान्त आफ्नो अंगदान गरेका छन् । उनीसंगै वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र कुमार यादव, नेपालका लागि कोरियन राजदुत पार्क योङ ले मरोणोपरान्त अंगदान गरेकाछन् । उपप्रधानमन्त्री यादवलाई महजोडी मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरीवंश आचार्यले परणोपरान्त अंगदान सम्बन्धि प्रमाणपत्र प्रदान गरे । भक्तपुरस्थित शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री यादवले मिर्गौला रोगबाट बच्न जनचेतनाको आवस्यक भएको बताए । उनले मरेर खेर जाने अंग अर्को व्यक्तिको लागि दान गर्नु महादान भन्दै अंगदानबारे पनि सचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिए । रोग लाग्न भन्दा पहिले नै सतर्कता अपनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री यादवले सरकारले मिर्गौला रोगको उपचारमा निशुल्क गरेको बताए । यादवले वर्तमान विश्वमा नसर्ने रोग मृत्युको प्रमुख कारण भएको र नेपालमा नसर्ने रोगबाट धेरै व्यक्तिहरु अकालमा मृत्यु भइरहेको भन्दै मुटु, क्यान्सर, मिगौला, कलेजो रोगबाट बच्न जनचेतना फैलाउनुपर्ने बताए । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्रकुमार यादवले मिर्गौला प्रत्यारोपिहरु स्वस्थ्य व्यक्ति…